China Healthy Coat Omega 3 uye 6 yePet Supplements fekitori nevatengesi | Weierli
Active chirungiso: Crude Protein, Crude Fat, Crude Fiber, Mhute, calcium, Phosphorus
Kurongedza: 60 mapiritsi
Kurema kweNet: 120g
Feature: zvipfuwo zvinowedzera
♦ Hutano Coat Omega 3 & 6 inyanzvi yezvechiremba inokurudzirwa zvipfuyo zvinowedzera kutsigira ganda uye kupfeka hutano mumhuka dzinovaraidza nechikafu kana nharaunda kushushikana kana kurwara kwemwaka. Yedu huru yekuyedza chewables ine omega 3 uye omega 6 fatty acids (EPA, DHA uye GLA) inova inovandudza ganda rine hutano uye rakapenya jasi mumhuka dzinovaraidza. Inoshanda nekukurumidza kutsigira yakapfava, yakasviba jasi uye kudzikisira yakajairwa kuteurwa.
♦ Nyore kushandisa. Musanganiswa unonwa unonamira pane chikafu chezuva nezuva kuwedzera huwandu hwakaringana hweOmega 3 yakakosha mafuta acids, EPA uye DHA.
Ingo kumhanyisa muchikafu chakajairwa.Kunonoka kuburitswa kwemafuta kunovimbisa huwandu hwebio-kuwanikwa kuchengetedza ganda rinopenya uye ganda rine hutano, kubvisa ganda rinonhuwa uye kunyaradza makoko akatsemuka, kubatsira kufamba kwekubatana, kukurudzira immune uye anti-kuzvimba masisitimu, kutsigira uropi uye kusimudzira kunoonekwa uye basa.
Tablets 2-3 mapiritsi zuva nezuva, zvinoenderana nezvinodiwa nemhuka yako wega. Rega mavhiki matatu kusvika mana kuti uone a kupindura, dzimwe imbwa dzinogona kupindura nekukurumidza.
♦ Sezvazvakaita neshanduko ipi neipi mukudya kwembwa yako, zvakakosha zvikuru KUTANGA PASI PASI PASI. Tanga nekupa imbwa yako Piritsi rimwe zuva nezuva nekudya kweinenge 2-3 mazuva. Ipapo iwe unogona kutanga kuwedzera iyo chipimo chemushonga nezuva rimwe chete pazvinenge zvichidikanwa.
♦ Izvi zvinowedzera zvekushandisa kweMhuka chete.
♦ Kuchengetedza kwekusvika kwevana. Usasiye chigadzirwa chisina kuchengetedzwa kutenderedza mhuka dzinovaraidza. Panyaya yekuwedzeredza, bata wako vet nekukurumidza.
Pashure: Heartworm Remedy Uyezve Imbwa Dewormer
Zvadaro: Akanakisa Mutengo paChina Gentamicin Jekiseni Veterinary Medicine Yakakwira Hunhu
mhuka yekuwedzera fekitori
OEM imbwa inowedzera
Omega3 chipfuwo chinowedzera
Pet Anowedzera Anogadzira
Mavhitaminzi Kune Imbwa
Calcium Carbonate Vic Cal Uyezve
Mineral yekuwedzera mune yehuku TOXIN PLUS
Ropa tonic piritsi penguruve